September 8, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
RASMI: Trent Alexander-Arnold oo ku guuleystay abaal-marinta da’yarka sanadka ee PFA
Cayaaraha September 8, 2020
(Liverpool) 08 Sebt 2020. Trent Alexander-Arnold ayaa ku guuleystay abaal-marinta da’yarka sanadka ee PFA, taasoo uu ku noqday da’yarka ugu wanaagsanaa guud ahaan Ingiriiska xilli ciyaareedkii tagay, waxaana uu ku garaacay dhowr xiddig oo da’yar ah kuwaasoo bandhig cajiib ah ku jiray fasal ciyaareedkii tagay. Daafacan Trent Alexander-Arnold ayaa ku Sii akhriso
RASMI: Kevin De Bruyne oo ku guuleystay abaal-marinta xiddiga sanadka ee PFA
(Manchester) 08 Sebt 2020. Laacibka khadka dhexe ee Kooxda Manchester City, Kevin De Bruyne ayaa ku guuleystay abaal-marinta ee PFA xiddiga sanadka ugu wanaagsanaa guud ahaan Ingiriiska xilli ciyaareedkii tagay, waxaana uu ku graacay dhowr xiddig oo kooxda Liverpool ah. Xiddiga xulka qaranka Belgium ayaa barbareeyey rikoorka xiddiga ugu caawinta badnaa hal xilli ciyaareed Sii akhriso
RASMI: Kaddib James Rodriguez Kooxda Everton oo xaqiijisay saxiix kale oo muhiim ah
(Liverpool) 08 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Everton ayaa xaqiijisay saxiixa Abdoulaye Doucoure, kaasoo ay kala soo wareegeen naadiga heerka labaad u laabtay ee Watford. Laacibka khadka dhexe ee reer France ayaa kooxda Toffees ugu biiray heshiis la rumeysan yahay inuu ku kacayo qiyaastii 22 milyan oo gini kaddib afar xilli ciyaareed oo uu ku sugnaa […]Sii akhriso
Wasaaradda warfaafinta oo bahda warbaahinta kala shirtay dhaqangalinta sharciga saxaafadda (War saxaafadeed)
Soomaaliya September 8, 2020
Muqdisho (SONNA)- Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Dowladda Fedaraalka Soomaaliya ayaa maanta u qabatay saxaafadda madaxa bannaan iyo ururada matala saxaafadda dalka qaarkood kulan ayaa waxa uu ujeedkiisu ahaa, inay dhagaystaan cabashooyinka qaar ka mid ah saxafiyiintu ay ka muujiyeen xeerka saxaafada Soomaaliya iyo dhaqan galinta xeerka oo uu Sii akhriso
RASMI: Maamulka La Liga oo xaqiijiyey tiradda bedellada la ogolaan doono xilli ciyaareedkan 2020-21
(Madrid) 08 Sebt 2020. Maamulka horyaalka La Liga ayaa xaqiijiyey in ogolaadeen in la isticmaalo shan bedel kal ciyaareedkan cusub ee 2020-21. Xiriirka kubadda cagta Spain ee Spanish Football Federation (RFEF) iyo Maamulka Horyaalka LaLiga ee Magaceeda loo soo gaabiyo LNFP ayaa waxa ay dajiyeen shaciyo la xiriira saameynta Korona Fayras xilli ciyaareedkan cusub. Waxaana Sii akhriso
Kooxda Barcelona oo xaqiijisay Magaca ciyaaryahanka uu Lionel Messi sida gaarka ah ula tababaran doono… (Waa kuma xiddigaasi?)
(Barcelona) 08 Sebt 2020. Kooxda reer Spain ee Barcelona ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in Kabtankeeda Lionel Messi uu si gaar ah tababar u qaadan doono kaligiis iyadoo laga dhex saaray xiddigaha kale ee naadiga. Xiddiga xulka Argentine ee Lionel Messi, ahna weeraryahanka iyo Kabtanka Kooxda Barcelona ayaa jimcihii la soo daafay ku dhawaaqay inuu […]Sii akhriso
RASMI: Kooxda Inter Milan oo dhammaystirtay saxiixa ciyaaryahankii hore ee Manchester City
(Milano) 08 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ee Waddanka Talyaaniga ayaa dhammaystirtay saxiixa ciyaaryahankii hore ee Manchester City, Aleksandar Kolarov. Daafacii hore ee Kooxda Roma Aleksandar Kolarov ayaa si rasmi ah uga mid noqday naadiga Inter Milan ee dalka Talyaaniga. Aleksandar Kolarov ayaa ogollaaday heshiis hal sano ah oo uu qiyaar u haysto inuu Sii akhriso
Madaxweyne Farmaajo oo shir ku casuumay Madaxda dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo gobolka Banaadir .
Muqdisho (SONNA)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku casuumay madaxda dowladaha xubnaha ka ah federaalka in ay ka soo qeyb galaan shir ay u dhanyihiin Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, kaasoo lagu dhammeystirayo hanaanka doorashooyinka dalka, iyadoo uu saldhig u yahay heshiiskii Samareeb-3. Sii akhriso
Guddiga Arrimaha Bulshada Aqalka Sare oo la kulmay sii haya Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada “Sawirro”.
Muqdisho (SONNA)-Guddiga Horumarinta Adeega Bulshada, Arimaha Bina’adannimada, Warfaafinta iyo Dhaqanka Golaha aqalka sare BFS ayaa kulan xog wareysi la yeeshay Siihayaha wasiirka wasaarada waxbarashada XFS . Kulankan ayaa waxa uu ka dhacay xarunta golaha Aqalka Sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudiga iyo sii hayaha wasiirka ayaa waxa ay qaateen kulan Sii akhriso
Horjoogayaal Alshabaab ah oo lagu dilay Jubbada hoose
Muqdisho(SONNA)-Ciidamada Kumaandooska Danab ayaa Howlgal qorsheysan ka fuliyay degaano hoos taga Jubbada Hoose kuna dilay Horjogayaal iyo Maleyshiyaad ka tirsan Nabadiidka Al-shabaab. Kumaandooska Danab ayaa Howlgalka ka fuliyay Degaanada Dhisheeg waamo Maroodi gubow,Dhaay unbow oo qiyaasti 75km u jirta Magaalada Kismaayo. Taliyaha Guutadda 16 ee Kumaandooska Danab Sii akhriso